छिमेक र विश्वशक्तिबीच नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
छिमेक र विश्वशक्तिबीच नेपाल
नेपालजस्तो मुलुकले सदैव छिमेक र विश्वशक्तिसित सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूको शक्ति संघर्षमा कुनै पनि रूपमा सामेल हुन हुँदैन ।
भाद्र १४, २०७७ चन्द्रशेखर अधिकारी
भारत–चीनबीच अढाई महिनाअघि भएको भिडन्तको तरंग अझै मत्थर हुन सकेको छैन । यसलाई एसियाका उदाउँदा शक्ति र पश्चिमा शक्तिबीचको घुमाउरो टकरावका रूपमा पनि लिइएको छ ।
किनभने, एसियाबाट पश्चिम पुगेको ‘विश्वशक्ति’ केही शताब्दीपछि पुनः एसियातिरै फर्कन/फर्काउन खोजिएका क्रममा यो महादेशका दुई ठूला मुलुकबीच झडप भएको बुझिन्छ । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वराजनीति एकध्रुवीय रह्यो । नब्बेको दशकको सुरुआततिर फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेपछि यो एकध्रुवीय मान्यता सर्वव्यापी बन्यो । सोभियत संघ विघटन हुनु, बर्लिनको पर्खाल भत्किनु र पूर्वी युरोपमा लोकतन्त्रको लहर छाउनु एकै समय रह्यो, जसको बाछिटा ल्याटिन अमेरिकासम्म पुग्यो । ‘साम्यवादी’ ध्रुवको पतनसँगै विश्वभर उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्र स्थापित हुँदै गयो ।
अहिले फेरि विश्व बहुध्रुवमा परिणत हुन खोज्दै गर्दा उदाउँदा शक्तिहरूबीच संघर्ष चुलिँदो छ । भारत–चीनको पछिल्लो सीमा विवाद परम्परागत शक्तिमा जाने कि उदाउँदो शक्तिसँग सहकार्य गर्ने विषयको संघर्ष हो । चीनले भारतलगायत छिमेकको सहकार्यमा एसियाबाट विश्व चलाउने धारणा मन्द रूपमा व्यक्त गरेको छ । वुहान होस् या ममोल्लिपुरम वार्ता, दुवैको गाँठी बुँदा त्यही हो, जुन एकअर्कामा सहकार्य गरी अघि बढ्ने रणनीति हो । भलै त्यो शैली परिपक्व बनिसकेको छैन ।
रूपमा सीमा विवाद देखिए पनि अन्तर्यमा निश्चित भूगोलमाथिको नियन्त्रण मात्र छैन । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई मुख्य कारक मानेर यति बेलाको भारत–चीन सीमा विवाद नियाल्न सकिन्छ । दुई देशबीच सीमा द्वन्द्व बढेसँगै विवाद मत्थर गर्न अमेरिकाले मध्यस्थता गर्न चाहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा आएसँगै यो विषयले फरक मोड लिएको छिप्दैन ।
लद्दाखको प्यांगोङसो हिमाली शृङ्खलाको उक्त क्षेत्रमा मे पहिलो साता झडप हुँदा दुवैतर्फबाट २५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएको अनुमान थियो । त्यसको तीन दिनपछि मे ९ मा धकेलाधकेलको अवस्था सिक्किमको नाथुलासम्मै पुग्यो । मे १९ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय सेनाले चिनियाँ सैनिकलाई ‘बोर्डर प्याट्रोलिङ’ मा अवरोध गरेको जनायो । मे २७ सम्म अनेक तहमा समाधानका बैठक भए । १५ जुनमा त भिडन्तै हुँदा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो । भारत र चीनबीच १९७५ अक्टोबरपछि यो नै ठूलो झडप थियो । त्यसपछि भारतीय जनरल हरेन्द्र सिंह र चिनियाँ सिंज्याङ क्षेत्र हेर्ने ल्यु लेन मेजर जनरलबीच भएको वार्ताबाट निचोड निस्किएन । हुन त, यस्तो विवादमा सेना–सेनाबीच छलफलको अभ्यास विरलै पाइन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मे २९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्दै भारत–चीनबीच मध्यस्थता गर्न तयार भएको सन्देश दिए । केही घण्टापछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मोदी र ट्रम्पबीच अप्रिल ४ देखि कुरै नभएको धारणा बाहिर ल्याए । भारतले औपचारिक रूपमा कसैको मध्यस्थता नचाहिने बतायो । चीनले पनि त्यस्तै धारणा बाहिर ल्यायो । ट्रम्पको खेल कच्चाजस्तो देखियो । यद्यपि, २ जुनमा मोदी र ट्रम्पबीच फेरि टेलिफोन वार्ता भयो, जसले चीनलाई थप झस्कायो ।
भारत र चीनबारे पनि छलफल भएको भनिएको उक्त वार्ताको थप विवरण बाहिर ल्याइएन । चीनको आशंका भनेकै भारत–अमेरिकाबीच बढ्दो सहकार्य हो । चीन अमेरिका–भारत सहकार्यलाई सदैव सतर्कतापूर्वक हेर्छ । उसले भारतको बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति खोजेको छ । तर, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अब भारत शीतयुद्धकालीन विश्व सम्बन्धबाट माथि उठेको जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा चीन भारतीय सीमामार्फत चलमलाउनुको अर्थ गम्भीर छ । चीनले भारत अमेरिकी क्याम्पमा गएको आँखाले हेरिसकेको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया अनौपचारिक सहकार्य (क्वाड) लाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएको उसका वक्तव्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।
चीनले आफ्नो कुनै कार्यबारे यसो गर्दै छु भनी प्रचार गर्दैन । भारतसँग समस्या भएको सीमाबाट बेइजिङभन्दा नयाँ दिल्लीनजिक छ । तर चीनले सजिलै त्यो क्षेत्रलाई ‘ट्रिट’ मात्र गरिरहेको छैन, भारतीय सैनिककै ‘एग्रेसन’ का कारण त्यहाँ समस्या भएको बताएको छ । भारतले पनि चिनियाँहरू भारतीय भूमिमा नआएको बताएको छ, जसको अर्थ आफैंमा चाखलाग्दो छ ।
जनता उचाल्न माहिर मोदी चीनको त्यो दबदबाविरुद्ध किन अघि बढेनन् ? यति बेला भारतमा यो प्रश्न उठिरहेको छ । भारत डराएको हो या परिपक्व तरिका अपनाएको भन्नेमा अन्योल छ । अमेरिकी विदेश र रक्षा मन्त्रीले ‘हिमालयन बोर्डर’ मा चिनियाँहरूलाई ‘लाइक माइन्डेड डेमोक्रेसी’ मिलेर तह लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको पटक–पटक भनेका छन् । तर फेरि उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘हामीलाई के कुरामा खुसी लागेको छ भने भारत र चीन वार्ता गरिरहेका छन् र शान्तिपूर्वक ढंगले सुल्झाउने अवस्था छ ।’ यसबाट बुझ्न सकिन्छ, अमेरिका विश्वमा अर्को शक्ति उदाएको देख्न पनि सक्दैन, चीनसँगको व्यापार बिगार्न पनि चाहँदैन । झगडा नगर भन्ने ढाडसको अर्थ त्यही हो । नत्र, आफ्ना ‘एयरक्राफ्ट क्यारिअर’ हरूलाई हिन्द महासागरमा परिचालन गरिसकेको अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा त्यसको मात्रा अझ बढाएर भारतीय सेनासँग थप सहकार्य गरेर फरक सन्देश दिन सक्थ्यो, तर त्यसो गरिहालेको छैन ।
दबाबमा भारतीय नेतृत्व
सीमामा कर्णेलसमेत गुमाएको भारत विक्षिप्त छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा पसेको बताए पनि चिनियाँ पक्षले भारतीयहरूकै कारण अवस्था असामान्य भएको भनेको छ । गलवान भ्याली र प्यांगोङसो क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकहरूको अप्रिलदेखि बढी आउजाउ थियो । यसबारे भारतीय सुरक्षा निकायले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि उसले त्यहाँ तत्काल सेना बढाउन सकेन । १५ जुनमा आफ्ना सैनिक मारिएपछि मोदी सरकारले आधिकारिक रूपमा भारतीय भूमिमा आएर चिनियाँले यस्तो कार्य गरेको र केही भूभाग कब्जा रहेको स्विकारेको थियो । अजय शुक्ला, सुशान्त सिंह, सुरजित सिंह लगायतका पत्रकार र पूर्वजनरल अशोक मेहताले समेत लेखेपछि यसबारे अलिक हल्ला भएको हो । ३ जुनमा रक्षामन्त्रीले घुमाउरो र दबिएको शैलीमा केही संख्यामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मी भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसमा भारत बोल्न नसक्नु वा नबोल्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।
यति बेला चिनियाँ सेनालाई कसरी पछि हटाउने भन्नेमा भारत लागिपरेको छ । जुनमा आएको रिपोर्टमाथि ‘एक्ट’ गर्न भारतीय नेतृत्वलाई कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षले उठाएको छ । सञ्चारमाध्यम सेनालाई दोष दिन्छन्, तर सेनाले दिएको रिपोर्टलाई राजनीतिक नेतृत्वले किन भुल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । फेरि यस्तो रिपोर्ट सेनामा मात्र सीमित रहँदैन, प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्छ । तीन वर्षअघि दोक्लममा पनि धकेलाधकेल भएकै थियो । तर त्यति बेला यस्तो गतिविधि ‘एलओसी’ क्षेत्रमा मात्र भएको थियो । यतिखेर चीनले सीमामा सैन्य संख्या, बङ्कर, डिफेन्स–वाल मेसिनरी बढाउँदै छ । बाहिर चिनियाँ सेना फिर्ता गएको भनिएको छ । जनरल मेहताले ‘द वायर’ मा २२ जुलाईमा लेखेअनुसार, चिनियाँ सैनिक पछि नहटे ६०० वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनतिर जानेछ ।पछिल्लो चिनियाँ रणनीति दुई कदम अघि बढ्ने र एक कदम पछि हट्ने देखिन्छ । भारतीय रक्षामन्त्रीले पुरानै क्याम्पमा फर्कने सहमति भएको र त्यसको पालना हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि चिनियाँ सैनिक अझै त्यहाँ रहेको अनुमान विज्ञहरूको छ ।
अब के त ?
सबैभन्दा बढी एयरक्राफ्ट क्यारिअर विश्वशक्ति अमेरिकासँग छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा उसले दुईवटा एयरक्राफ्ट करिअर राखेको छ । अमेरिका–भारत सहकार्यमा साउथ चाइना सीका धेरै कुरा जोडिन्छन् । जापान र बेलायत अमेरिकाका पक्षमा छन् । बेलायतले पनि त्यो क्षेत्रमा एयरक्राफ्ट क्यारिअर पठाउँदै छ । यही कारण पनि चीनको ‘एग्रेसन’ बढेको देखिन्छ । त्यसैले यसै क्षेत्रमा पर्ने नेपाल चीनसँगको सम्बन्धमा यस्ता विषयमा बढी सचेत देखिनुपर्छ । भारत चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न पनि सक्दैन, अमेरिकासँग जापानजस्तो पूरै गठबन्धनमा जान पनि सक्दैन । नेपालजस्तो मुलुक त झन् बढी सचेत भएर छिमेक अनि तेस्रो शक्तिसित सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । यति बेला भारत, चीन, अमेरिका लगायतका प्रमुख शक्तिहरूले नेपाललाई हेर्ने आधारभूत नीतिमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । उनीहरूको शक्ति संघर्षमा नेपाल कुनै रूपमा पनि सामेल हुनु हुँदैन । जसरी सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध र सन् २०१७ को दोक्लम विवादका बेला नेपालले तटस्थता अपनाएको थियो, सदैव त्यही नीति अवलम्बन गरेर अनावश्यक तर्क/कुतर्क नगरी अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ ०९:१२
अबको यात्रा कृषि र पर्यटनतिर
‘इको टुरिजम’, ‘रिलिजियस टुरिजम’ र ‘रिक्रिएसन टुरिजम’ गरी पर्यटनलाई तीन श्रेणीमा विभक्त गरेर पर्यटन शिक्षाको नयाँ ढाँचा ल्याउनु अबको आवश्यकता हो । अब आफ्नै देशको संस्कृति र प्रकृतिअनुसारको विषयवस्तु पढाउनुपर्छ ।
भाद्र १४, २०७७ सुरेशराज शर्मा
कृषि, वन र जलस्रोत नै हाम्रो देशका सम्पत्ति हुन् । तिनको ठीकसित जगेर्ना गरी विकसित भइसकेको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि ठीकसित गर्ने हो भने हामीलाई पुग्ने सबै थोक हामीसँगै छ । आज सूचना–प्रविधिले ज्ञान र प्रविधि घरघरसम्म पुर्‍याइदिएको छ । त्यसको फाइदा लिन जान्नु मात्र परेको छ ।
तर यो कुरा हामीले भन्ने गरेको र खासै केही गर्न नसकेको भने धेरै वर्ष भइसक्यो । अब नयाँ ढंगले कृषिकर्म गर्न थालिहाल्नुपरेको छ । तर कुन प्रविधि हाम्रा लागि बढी सुहाउँदो छ, त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहन अनुसन्धान गर्नु पनि आवश्यक छ । अनुसन्धान प्रयोगशालामा मात्र होइन, उत्पादनस्थलको नजिकै वा त्यही स्थलमै गरिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
हामीले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गर्नु आवश्यक छ । प्रकृतिले दिएको ठूलो वरदान प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नबिगारी पर्यटकलाई यहाँ आउन लोभ्याउनु त्यत्तिकै जरुरी छ । अर्कातिर, कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असरपछि शिक्षाको ढाँचाले परिवर्तन खोजेको छ । त्यसका लागि संविधानले नै विकेन्द्रित प्रणालीलाई स्वीकार गरेकाले शिक्षण क्षेत्रलाई विकेन्द्रित ढाँचामै लैजानुपर्छ एवं प्रान्तीय विश्वविद्यालय र कलेज बनाउनुपर्छ । नेपालका लागि संस्कृतिसँग जोडिएको पर्यटन, कृषि र प्राकृतिक स्रोत महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । त्यसैले सरकारले पनि पर्यटकका रूपमा धेरै सङ्ख्याका विदेशीलाई नेपालमा भित्र्याउन खोजेको हो । नेपालप्रति विदेशीलाई आकर्षित गर्न प्राकृतिक सौन्दर्य भएको संरचनालाई दोहन गर्न हुँदैन ।
‘इको टुरिजम’, ‘रिलिजियस टुरिजम’ र ‘रिक्रिएसन टुरिजम’ गरी पर्यटनलाई तीन श्रेणीमा विभक्त गरेर पर्यटन शिक्षाको नयाँ ढाँचा ल्याउनु अबको आवश्यकता हो । कृषिप्रणालीजस्ता विषयहरूलाई यस्तै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । हामीले विकसित देशको प्रकृति र संस्कृति पढायौं, आफ्नै देशको चाहिँ पढाएनौं । अब आफ्नै देशको संस्कृति र प्रकृतिअनुसारको विषयवस्तु पढाउनु आवश्यक छ । यही कुराको सेरोफेरोमा रहेर पहाडी खेती (हिल एग्रिकल्चर), पर्वतीय पर्यटन (इको–टुरिजम, माउन्टेनियरिङ स्टडिज एन्ड रिसर्च) का बारेमा यहाँ केही भन्न चाहन्छु । नेपालको ८७ प्रतिशत भाग भिरालो जमिन पर्वतीय क्षेत्रमा परेको हुँदा त्यसैबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक पनि देखिन्छ । पहिलो चरणमै सुरु गर्नुपर्ने तीन ठाउँको यहाँ चर्चा गर्छु ।
पाख्रिबास कृषि विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र
पूर्वी पहाडको केन्द्रजस्तै ठाउँ हो पाख्रिबास । त्यहाँबाट हिमालका सबैभन्दा आकर्षक भागहरू देखिन्छन् । कञ्चनजङ्घा, मकालु, सगरमाथा, रोल्वालिङ त्यसैका नजिक छन् भने, थुप्रै औषधिजन्य वनौषधि, चिया र जुस उत्पादन हुने पर्वत र उपत्यका पनि त्यतै छन् । जलस्रोतको कुरा गर्दा अरुण नदी, तमोर नदी र सप्तकोशी त्यतै छन् । पाख्रिबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र र उत्तरपानी कृषि तालिम केन्द्र आसपासमै छन् । कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनसम्बन्धी उद्योग र अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र बनाउन सकिने केन्द्र त्यहीँ हुन सक्छ । यातायातका दृष्टिकोणले पनि त्यो क्षेत्र निकै अनुकूल देखिन थालेको छ ।
त्यही ठाउँमा एक–दुईवटा साना आकारका ताल पनि बनाएर स्वदेशी–विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । अब शिक्षा दिने केन्द्र, अनुसन्धान गर्ने केन्द्र, उत्पादन गर्ने केन्द्र छुट्टाछुट्टै बनाउनेभन्दा ती सबैबीच आपसी सहयोग र आपसी प्रयासमा इन्क्युबेसन सेन्टर, साइन्स पार्क, टेक्नोलोजी पार्क वा औद्योगिक पार्क सँगसँगै बनाउने सोच चाहिएको छ । रोजगारदाता पनि त्यहीँ र रोजगारी पनि त्यहीँ हुनुपर्ने सोच चाहिएको छ ।
अब बाटो पनि, उद्योग पनि, अनुसन्धान स्थल र शिक्षण केन्द्र पनि विदेशीले गरे मात्र हुन्छ भन्ने दिन गए । विदेशीले यहाँ व्यापार वा उद्योग हुन सक्छ भनी लगानी (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट) गर्न सक्छन् र त्यहाँ नजिककै क्षेत्रमा राम्रा हिल स्टेसन हुन सक्छन् ।हिल स्टेसनमा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ स्कुल), अस्पतालहरू, पर्यटन केन्द्रहरू, होटल र लजहरू स्थापना हुन सक्छन् । तिनै भेगतिर चौंरीगोठ र भेडीगोठहरू बनाएर ऊनी धागो र दुग्ध पदार्थका थुप्रै उद्योग खोल्न सकिन्छ । न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, इजरायलले जे गरे, त्यो गर्न सकिन्छ । बागवानीका लागि त्यही क्षेत्र उत्तम हुन सक्ने देखिन्छ ।
त्यत्तिकै अनुकूल दामन, पालुङ र कुलेखानी क्षेत्र पनि छ । यो मध्यपहाडी भेग काठमाडौं उपत्यका, हेटौडा, चितवन उपत्यकाको केन्द्रजस्तै ठाउँमा रहेको अत्यन्त आकर्षक स्थल हो । यो पनि पहाड र उपत्यका भेगका कृषि, वन, पर्यटन र जलस्रोतको केन्द्रस्थल भएको ठाउँ हो । कृषि र वनका विश्वविद्यालय र कलेज त्यतै छन् । काठमाडौंमा त स्वास्थ्य, प्रविधि र अरू विषयका केन्द्रहरू पनि छन् । पर्यटनका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा निकुञ्ज नजिकै छन् । केबलकार, रोप– वेहरू आसपासमै छन् । वरिपरिका नदीनालाबाट एकत्रित भएर पानी जम्मा भएको कुलेखानी प्रोजेक्टकै शिरतिर भएको, हिमाली शृङ्खला, महाभारत शृङ्खला र चुरे शृङ्खलाको समेत बीचबीचतिर वा सामुन्ने रहेको अत्यन्त आकर्षक स्थल हो यो । यहाँ त्यस्ता हिल स्टेसन बनाउन सकिन्छ, जहाँ हप्तौं वा महिनौं पर्यटकहरू बस्न आउने लज बनाउन सकिन्छ, बौद्ध गुम्बा वा अध्ययन केन्द्रहरू बनाउन सकिन्छ ।
शिक्षण संस्था भनेका गुरुले पढाउने, घोकाउने र जाँच लिएर प्रमाणपत्र दिने केन्द्र मात्र होइनन्, रोजगारी प्राप्त गर्ने केन्द्र मात्र पनि होइनन्, रोजगारी प्रदान गर्ने स्थल पनि हुन् । त्यस्तै ज्ञान भित्र्याउने, प्रविधि भित्र्याउने, प्रविधि र ज्ञान प्रसारित गर्ने स्थल मात्रै होइनन्, ती विषय विकास गर्ने, सिकाउने र सिक्ने मिलेर नयाँ खोज र उत्पादनमा सरिक हुने स्थल पनि हुन् र ती विषय विकास गर्ने केन्द्रसमेत हुन् । आजको समयमा एकपल्ट विकास भएको प्रविधिलाई धेरै समयसम्म प्रयोग गरिरहनेभन्दा प्रविधि नै चाँडै–चाँडै परिवर्तन भइरहेका छन् । तिनको प्रयोग गर्ने स्थलहरू पनि कङ्क्रिटका घरले भरिएका हाताभित्रभन्दा सूचना–प्रविधिले पूरै प्रवाहित भएका अनलाइन क्रियाकलापबाट विस्थापित हुँदै जान थालेका छन् । अब ज्ञानहरू पुस्तकालयमा सङ्गृहीत हुन्छन्, विद्वान्हरू एकै ठाउँमा थुप्रिएका हुन्छन् भन्न मिल्दैनÙ ती त जताततै छरिएका हुन्छन् । सेकेन्ड–सेकेन्डमा सम्पर्कमा रहिरहेका हुन्छन् । सूचना–प्रविधिले जस्तै जीवप्रविधिले पनि चमत्कार गर्दै छ । यी कुराहरू बिस्तारै सबैको जनजीवनभित्र पसिसकेका छन् ।
विश्वलाई चाँडै आतंकित पारेको कोभिड–१९ ले चाँडै राहत पनि दिन सक्छ । अझ बढी समय आतंकित पार्न पनि सक्छ । यसले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र यातायातमा पनि प्रभाव पारेको छ । यसले आजको अवस्था कस्तो दिशातिर जाँदै छ भन्ने संकेत गरेको छ ।
गण्डक र अन्नपूर्ण क्षेत्र
यस क्षेत्रले त हिमालवारि मात्र होइन, हिमालपारिसम्मै ओगटेको छ । पूर्वी क्षेत्रको एउटा चरित्र छ भने मध्यक्षेत्रको अर्को । गण्डक र अन्नपूर्ण त अझ धौलागिरि क्षेत्रसम्म पुगेको छ । कृषिको दृष्टिकोणले उच्च पहाडी भाग र आकर्षक उपत्यका, टार र नदीकिनार (रिभर बेसिन) भएको क्षेत्र हो यो गण्डक र अन्नपूर्ण क्षेत्र । पहिले २०२५ सालतिर पोखरा पुग्दा त्यहाँबाट अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे अनि फेवा र बेगनास ताल देखेर म खुबै लोभिएको थिएँ । पछि मुस्ताङका जोमसोम, मुक्तिनाथ, मार्फा, टुकुचे, कोबाङ, लेते हुँदै बागलुङ पुग्दा ‘मेरो देश कति राम्रो रहेछ, यहाँका दाजुभाइ र बासिन्दालाई हेर्दा आफ्नै देशको विविधता देख्न पाइँदो रहेछ’ भन्ने सम्झन पुगेको थिएँ ।
यस भेगले कति लोभ्यायो भने, म मुस्ताङतिर नै बीसौंपल्ट पुगें होला । उपल्लो मुस्ताङ नै दुईपल्ट जोमसोमबाट हिँडेरै पुगें । ‘त्यो ठाउँ बिछट्टै राम्रो छ, हेर्न जाऊ, उडेर मात्र होइन, हिँडेरै जाऊ’ भनेर राजा वीरेन्द्रले भनेको सम्झन्छु । स्विस भूगर्भविद् टोनी हेगनले लेखेको ‘टोनी हेगन्स नेपाल’ र मिखेल पिसेलले लेखेको ‘अ लस्ट टिबेटन किङडम’ पुस्तक पढेपछि नेपाल कस्तो रहेछ भनेर हामी नेपालीले भन्दा पहिले त विदेशीले पो चिनेछन् जस्तो लाग्यो ।
म राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा काम गर्थें । नेपालको शिक्षा योजना लागू गर्न बनेको माथिल्लै तहको संस्था थियो त्यो । राजालाई बागलुङमा एउटा कृषि कलेज बनाउने इच्छा जागेछ । विशेष गरेर उच्च पहाडी भेग मार्फाको कृषि फर्ममा फलेका स्याउको स्वाद, बेनी (म्याग्दी) भेगका सुन्तला, जुनार, भोगटे र बागलुङतिरका आँप, मेवा, केरा, कटहरले र त्यताका तरकारीले निकै लोभ्याएछन् । शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, कृषिका डिन र म शिक्षा समितिको सदस्य–सचिवलाई पोखराको रत्न मन्दिरमा बोलाई राजाले ‘कृषि कलेज बनाइहाल’ भनेका थिए । पछि जोमसोममा प्लेनबाट ओर्लिई धौलागिरि अञ्चलका मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत चारै जिल्लामा पैदलै पुगें म । धौलागिरि पर्वतको फेदीतिरका मार्फा, टुकुचे, कोबाङ र लेतेको सौन्दर्य देखें ।
मिखेल पिसेलले मुस्ताङको यात्रामा संसारकै ठूलो र गहिरो म्याग्दीको खोच देखेपछि जियोलोजिकल स्टडिज, बुद्धिस्ट स्टडिज, हाई हिल एग्रिकल्चरल र मेडिसिनल प्लान्ट बारेको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गर्न सुझाएको सम्झें । अझ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, विन्डपावर डेभलपमेन्ट र सोलारपावर डेभलपमेन्टको समेत गहन अध्ययन–अनुसन्धानको त्यत्तिकै महत्त्व बोकेको, थकाली र गुरुङ जातिको संस्कृति र भूगर्भशास्त्रको शिक्षण–अनुसन्धान, पर्यटनमुखी सीप विकास गर्न उर्वर भूमि रहेको पाएको थिएँ । अनि शिक्षा भनेकै ज्ञान र खोज गर्ने र नयाँ पिँढीलाई सिकाउने कुरा रहेछ भन्ने लाग्यो ।
कृषि, वन पैदावार, ऊर्जा, पर्यटन र अझ विशेष गरी बुद्धधर्मको मर्म र गहिराइबारे अध्ययन–अनुसन्धान र खोजका लागि संसारका सर्वोच्च शिखरहरू, त्यो पनि नेपालभित्रकै अन्नपूर्ण र धौलागिरि एवं गण्डकी नदीकै आसपासका क्षेत्रहरूका लागि यो भेग अति नै आकर्षक र उत्तमजस्तो लाग्छ । पर्यटन, कृषि, वन र ऊर्जाकै सेरोफेरोमा हाम्रो शिक्षा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसको केन्द्रभूमि पोखरा नै हुनुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ ।
कृषि, वन, पर्यटन र ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन–अध्यापन, सीप र पर्यटनजस्ता आर्थिक र सामाजिक कार्यक्षेत्रभित्र ध्यान केन्द्रित गर्दै अगाडि बढाउन नयाँ पिढीलाई उत्प्रेरित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो र मार्गचित्र पनि हो ।
(शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन् ।)
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ ०९:११